Shan State Supreme Court - စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ
စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ
1 (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
2 (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
3 (၂၃-၆-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
4 (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
5 (၂၈-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
6 (၇-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
7 (၃-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
8 (၂၇-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
9 (၂၀-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
10 (၂၃-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်း
ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံး နှင့် ဟိုပုံးမြို့နယ် တရားရုံး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမည့် မိုင်းရှူးခရိုင်တရားရုံး နှင့် နမ့်စန်ခရိုင်တရားရုံးများ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် လျာထားသည့် ရုံးမြေနေရာများ သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများ၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး၊ တရားရေးအရာရှိများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသတရားသူကြီး၊ ခရိုင်တရားသူကြီးနှင့် မြို့နယ်တရားသူကြီးများ၏ အမှုလက်ကျန်လျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
Copyright © 2022 High Court of Shan State. All Rights Reserved.
Email : shan.hc@mptmail.net.mm
Last Updated : 01 July 2022